ပရီးမီးယားလိဂ် ကစား ဖို့ ရှိနေတဲ့ . . . မန်ချက်စတာယူနိုက်တတ် သတင်းတိုများ - SPORTS MYANMAR
ပရီးမီးယားလိဂ် ကစား ဖို့ ရှိနေတဲ့ . . . မန်ချက်စတာယူနိုက်တတ် သတင်းတိုများ
By sportstv_admin September 22, 2018
မန် ချက် စတာ ယူ နိုက်တတ် အသင်း ဟာ ယနေ့ ည မြန် မာ စံ တော် ချိန် ည ၈း၃၀ အချိန် မှာ ပ ရီး မီး ယား လိဂ် ပွဲစဉ် ၆ အဖြစ် ၀ုဗ် အသင်း ကို အိမ် ကွင်း မှာ လက် ခံ ကစား ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ယူ နိုက် တက် ဟာ ဘန် လေ ၊ ၀က်ဖိုဒ့် အသင်း တွေ ကို ဆက် တိုက် အနိုင် ရရှိ ထား ပြီး ယခု ပွဲ ကို အနိုင် ကစား နိုင် ခဲ့ ပါက အမှတ် ပေး ပွဲ ၃ ပွဲ ဆက် အနိုင် ရရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ယူနိုက် တက် အသင်း မှာ တော့ ပွဲ ပယ် ခံ ထား ရတဲ့ မာတစ် နဲ့ ရက် ဖိုဒ့် တို့ ပါဝင် နိုင် ကြ မှာ မဟုတ် ပါဘူး ။
ဒါ့ အပြင် နောက် ခံလူ တွေ ဖြစ် တဲ့ ရိုဟို နဲ့ ကွင်း လယ် လူ အန် ဒါ ဟာ ရဲ ရား တို့ ဟာ ဒဏ် ရာ ကနေ သက် သာ ခြင်း မရှိ သေး ဘဲ ဖီးလ် ဂျုံးစ် တစ်ဦး သာ ဒဏ် ရာ ကနေ ပြန် လည် သက် သာ လာပြီ လို့ သိရ ပါတယ်
ယူနိုက် တက် နည်းပြ ကြိး မော် ရင်ဟို က တော့ ယန်းဘွိုင်းစ် နဲ့ ပွဲ မှာ ပါဝင် ကစား ခဲ့ တဲံ ဒီ ယေ ဂို ဒါးလော့ ကို ယနေ့ ည ပွဲ မှာ အသုံး ပြု မှာ မဟုတ် ပေမယ့် ဒါးလော့ ဟာ ၁၀၀% လန်းဆန်း နေပြီး ဒါဘီ နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား မယ့် လိဂ် ဖလား ပွဲ မှာ ပါဝင် မယ် လို့ အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ယနေ့ ည မှာ အသင်း ခေါင်းဆောင် အန်တို နီယို ဗလင်စီယာ ပြန် လည်ပါဝင် လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ သမိုင်း တစ်လျောက် ၀ုဗ် အသင်း နဲ့ ၉၈ ကြိမ် ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ ဖူး ပြီး ၄၈ ပွဲ အနိုင် ရခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ဟာ ၀ုဗ် နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ် လ တုန်းက နောက် ဆုံး ရင်ဆိုင် ကစား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ဟာနန်ဒက် ၊ ဗလင် စီယာ ၊ အီဗန် ၊ ၀ဲဘတ် တို့ ရဲ့ သွင်းဂိုး တွေ နဲ့ အဝေး ကွင်း မှာ ၅ ဂိုး ပြတ် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
ယနေ့ ည ပွဲ ကို တော့ ကီဗင် ဖရိုင်း က ကွင်းလယ် ဒိုင် အဖြစ် တာဝန် ယူ ကိုင်တွယ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ ပွဲ ဟာ ယခု ရာသီ အတွင်း ဖရိုင်း ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် ယူနိုက် တက် ပွဲစဉ် ဖြစ် ပြီး ဘရိုက်တန် ကို ၃-၂ ဖြင့် ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲ မှာ လည်း ကီဗင် ဖရိုင်း က ဒိုင်လူကြီး အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက် တက် တိုက် စစ် မှုး အလက် ဆစ် ဆန်း ချက် က တော့ တန်းတက် အသင်း တွေ နဲ့ ဆုံ တွေ့ တဲ့ ပွဲ တွေ မှာ မှတ် တမ်း ကောင်း တွေ ရှိ ထားပြီး ၁၅ ဂိုး သွင်း ကာ ၄ ဂိုး ဖန်တီး ပေး ထား နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
၀ုဗ် အသင်း နဲ့ ပွဲကြို ပြင်ဆင် ဖို့ အတွက် လို ရီ ဟိုတယ် ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ ကြတဲ့ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား များ –
ဒီဂီယာ ။ ရိုမဲ ရိုး ။ ဂရန့်
ဗလင် စီ ယာ ။ စမောလင်း ။ လင် ဒီ လော့ဖ် ။ ဘိုင် လီ ။ ရှော ။ ယန်း
ပါရဲရား ။ တော် မီ နေး ။ ဖယ် လေ နီ ။ ပေါ့ ဘာ ။ ဖ ရက် ။ မာတာ ။ လင် ဂတ်
ဆန်းချက် ။ လူ ကာ ကူ ။ မာရှယ်
SANTA CLARA, CA – JULY 22: Jose Mourinho the head coach / manager of Manchester United during the Pre-Season match between Manchester United v San Jose Earthquakes at Levi’s Stadium on July 22, 2018 in Santa Clara, California. (Photo by Matthew Ashton – AMA/Getty Images)
မနျ ခကျြ စတာ ယူ နိုကျတတျ အသငျး ဟာ ယနေ့ ည မွနျ မာ စံ တျော ခြိနျ ည ၈း၃၀ အခြိနျ မှာ ပ ရီး မီး ယား လိဂျ ပှဲစဉျ ၆ အဖွဈ ၀ုဗျ အသငျး ကို အိမျ ကှငျး မှာ လကျ ခံ ကစား ရမှာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ယူ နိုကျ တကျ ဟာ ဘနျ လေ ၊ ၀ကျဖိုဒျ့ အသငျး တှေ ကို ဆကျ တိုကျ အနိုငျ ရရှိ ထား ပွီး ယခု ပှဲ ကို အနိုငျ ကစား နိုငျ ခဲ့ ပါက အမှတျ ပေး ပှဲ ၃ ပှဲ ဆကျ အနိုငျ ရရှိ မှာ ဖွဈ ပါတယျ ။
ယူနိုကျ တကျ အသငျး မှာ တော့ ပှဲ ပယျ ခံ ထား ရတဲ့ မာတဈ နဲ့ ရကျ ဖိုဒျ့ တို့ ပါဝငျ နိုငျ ကွ မှာ မဟုတျ ပါဘူး ။
ဒါ့ အပွငျ နောကျ ခံလူ တှေ ဖွဈ တဲ့ ရိုဟို နဲ့ ကှငျး လယျ လူ အနျ ဒါ ဟာ ရဲ ရား တို့ ဟာ ဒဏျ ရာ ကနေ သကျ သာ ခွငျး မရှိ သေး ဘဲ ဖီးလျ ဂြုံးဈ တဈဦး သာ ဒဏျ ရာ ကနေ ပွနျ လညျ သကျ သာ လာပွီ လို့ သိရ ပါတယျ
ယူနိုကျ တကျ နညျးပွ ကွိး မျော ရငျဟို က တော့ ယနျးဘှိုငျးဈ နဲ့ ပှဲ မှာ ပါဝငျ ကစား ခဲ့ တဲံ ဒီ ယေ ဂို ဒါးလော့ ကို ယနေ့ ည ပှဲ မှာ အသုံး ပွု မှာ မဟုတျ ပမေယျ့ ဒါးလော့ ဟာ ၁၀၀% လနျးဆနျး နပွေီး ဒါဘီ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစား မယျ့ လိဂျ ဖလား ပှဲ မှာ ပါဝငျ မယျ လို့ အတညျပွု ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ယနေ့ ည မှာ အသငျး ခေါငျးဆောငျ အနျတို နီယို ဗလငျစီယာ ပွနျ လညျပါဝငျ လာ မှာ ဖွဈ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ ဟာ သမိုငျး တဈလြောကျ ၀ုဗျ အသငျး နဲ့ ၉၈ ကွိမျ ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ ဖူး ပွီး ၄၈ ပှဲ အနိုငျ ရခဲ့ ဖူး ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ဟာ ၀ုဗျ နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈ မတျ လ တုနျးက နောကျ ဆုံး ရငျဆိုငျ ကစား ခဲ့ တာ ဖွဈ ပွီး ဟာနနျဒကျ ၊ ဗလငျ စီယာ ၊ အီဗနျ ၊ ၀ဲဘတျ တို့ ရဲ့ သှငျးဂိုး တှေ နဲ့ အဝေး ကှငျး မှာ ၅ ဂိုး ပွတျ အနိုငျ ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။
ယနေ့ ည ပှဲ ကို တော့ ကီဗငျ ဖရိုငျး က ကှငျးလယျ ဒိုငျ အဖွဈ တာဝနျ ယူ ကိုငျတှယျ မှာ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒီ ပှဲ ဟာ ယခု ရာသီ အတှငျး ဖရိုငျး ရဲ့ ဒုတိယ မွောကျ ယူနိုကျ တကျ ပှဲစဉျ ဖွဈ ပွီး ဘရိုကျတနျ ကို ၃-၂ ဖွငျ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့တဲ့ ပှဲ မှာ လညျး ကီဗငျ ဖရိုငျး က ဒိုငျလူကွီး အဖွဈ ပါဝငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ယူနိုကျ တကျ တိုကျ စဈ မှုး အလကျ ဆဈ ဆနျး ခကျြ က တော့ တနျးတကျ အသငျး တှေ နဲ့ ဆုံ တှေ့ တဲ့ ပှဲ တှေ မှာ မှတျ တမျး ကောငျး တှေ ရှိ ထားပွီး ၁၅ ဂိုး သှငျး ကာ ၄ ဂိုး ဖနျတီး ပေး ထား နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
၀ုဗျ အသငျး နဲ့ ပှဲကွို ပွငျဆငျ ဖို့ အတှကျ လို ရီ ဟိုတယျ ကို ရောကျရှိ လာခဲ့ ကွတဲ့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမား မြား –
ဒီဂီယာ ။ ရိုမဲ ရိုး ။ ဂရနျ့
ဗလငျ စီ ယာ ။ စမောလငျး ။ လငျ ဒီ လော့ဖျ ။ ဘိုငျ လီ ။ ရှော ။ ယနျး
ပါရဲရား ။ တျော မီ နေး ။ ဖယျ လေ နီ ။ ပေါ့ ဘာ ။ ဖ ရကျ ။ မာတာ ။ လငျ ဂတျ
ဆနျးခကျြ ။ လူ ကာ ကူ ။ မာရှယျ